Tag: naqshadeynta emaylka | Martech Zone
Tag: naqshad email
5 Tilmaamood oo lagu hagaajinayo Khibrada Emailkaaga Fasaxa ee 2017
Isniin, November 13, 2017 Douglas Karr
Wada-hawlgalayaashayada 250ok, oo ah boosteejo waxqabadka emaylka, oo ay weheliyaan Hubspot iyo MailCharts waxay bixiyeen xog muhiim ah iyo kala duwanaansho labadii sano ee ugu dambeysay ee xogta Black Friday iyo Cyber ​​Monday. Si aan kuu siiyo talada ugu fiican ee la heli karo, Joe Montgomery oo ka tirsan 250ok wuxuu la shaqeeyay Courtney Sembler, Inbox Professor oo ka tirsan HubSpot Academy, iyo Carl Sednaoui, Agaasimaha Suuqgeynta iyo Aasaasaha MailCharts. Xogta emaylka ee la raaciyay waxay ka timid falanqaynta MailCharts ee ugu sarreysa 1000
Waxaa jira sabab shirkadaha badankood qorsheynayaan inay waqti iyo lacag badan ku bixiyaan suuqgeynta iimaylka ee 2016: suuqgeynta iimaylka ayaa sii wada inay heystaan ​​ROI-ga ugu sarreeya dhammaan kanaallada suuqgeynta dhijitaalka ah. Suuqgele kasta wuxuu leeyahay adeeg bixiyaha emaylka ay doorbidaan iyo liiska hubinta horumarka iimaylka. Laakiin inta badan waxay iska indha tiraan waxa ugu muhiimsan ee ololaha: iyagoo ku tijaabinaya emaylkooda aalado badan iyo macaamiil ka hor inta aysan dejin ololaha la geeyo. In kasta oo ololeyaal badan oo tijaabo ah la dirayo emayl
Waa Maxay Waxyaabaha Ay Tahay Inaad Ku Tijaabiso Ololeyaasha Emailkaaga?
Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Douglas Karr
Adiga oo adeegsanaya meelaynta sanduuqaaga oo ka socota 250ok, waxaan sameynay tijaabo dhowr bilood ka hor halkaas oo aan dib uga dhiganay khadadka mawduucayada joornaalka. Natiijadu waxay ahayd mid layaableh - meelaynta sanduuqayagu wuxuu ka kordhay 20% guud ahaan liiska abuurka ee aan abuurnay. Xaqiiqdu waxay tahay in baaritaanka emaylku u qalmo maalgashiga - sidoo kale waa aaladaha kaa caawinaya inaad halkaas gaarto. Ka soo qaad in aad tahay shaybaarka masuulka ka ah oo aad qorsheyneyso inaad waxbadan tijaabiso